Onkoloolessa 28, 2017
Abbaa Gadaa Booranaa Kuraa Jaarsootii fi jaarroleen biyyaa dhiba naannoo isaanii himachuuf Biirolee naannoo Oromiyaa dhqan
Waraanii federaala Onkololeessa 12,2017 magalaaa Sooddatti nama afur fixee haga 20 madeesse.Dubbiin sun makiinaa fahiisaa 8 ka wal harkisee yaa’u waan innii fa’ate soquu fi soquu dhowwuu irratti dhufte.
Guyyoo Gobbaa,abbaa Gadaa Booranaa 70essoo
Akka warrii lafaa jedhutti bulchiinsaa naannootii fi warri lafaalleen walti dhufee akka makiinaa sun soqan waliin gaafate. Waan innii fa’atee yaahuun beekuuf soquu fedhanii taatullee waraanii eeguma suniif dhufe akka soqan hin eeyyamne.
Warrii lafaa ammoo makiinaa dhedheeraa wal harkisu sun midhaanii fi qawwee walti fa’e jedhee shakke. Tana irratti wal dhabii dhufee name ilubbuu dhabe. Namii lubbu dhabe hagii tokko ijoollee barattoota ta dibbeessa qawwee dhageettee mana barusmaatii baqatte akka warrii lafaa jedhutti.
Abbootiin Gadaa Booranaa,Kuraa Jaarsoo,Guyyoo Gobbaa faatii jaarroleen dhibiillee guurrattee akka warrii nama fixe jedhan seeraan himataman gaafachuuff Biiroo Mootummaa Naannoo Oromiyaa dhaqan.
Abbaa Gadaa Kuraa Jaarsoo saatii feeneetti bilbilaan arguu hin dandeenne taatullee akka Abbaa Gadaa Guyyoo Gobbaa jedhetti jaaarroleen rakkoo himachuu yaate woma rakkoo tanaatiif torbaan tokko Finfinnee turte.Biiroo pirezidaantii Oromiyaa fi Biiroo Nagaa Oromiyaa dhaqanii rakkoo himatanii beellamaan galan. Pirezidaantiillee wal gahahii akka akkaatiifuu argachuu hin dandeenne.
Gama kaaniin ammoo jaarroleen tun achumaan rakkoo Koolleejjii takkittii Booranaatti silaa hin jaaran jedhan Koolleejjii Barsiisota Yaaballoo ta silaa bara kana hujii jalqabdi jedhanii amma ammoo bajatiitti hin jirre jedhanii waan haftu fakkaattullee himachuuf achi dabran.
Koolleejjiin tun akka qara jedhantti barana kana hujii jalqabdi, barattoota galmeessanii, diinii qaxaranii,makiinaalleen argatanii silaa hujiif eegachuutti jrian.
Akka jaarroleen gaafattee galte jettutti koollejjii tanaa saatii silaa bajata qabuufii malanitti bajatii hin qabamneef jedhan jedhan. Woma taateefuu itti gaafatamtootii itti iyyatan akka jaarroleen galtee waan jiraa bilbilaan odeefatan itti himan.
Godinii Booranaa ka nama miliyoona tokkoo oliitti keessa jriaata jedhan yuniverstii amma dhakaa yayyabaa yaaballotti kaahaniif malee yuniversitii fi koolleejjiillee hin qabu.